IHacker 2.0, umdlalo wevidiyo ye-GO elungiselelwe ukusuka kwi-Square Enix | I-Androidsis
Uthotho lwe-Square Enix's GO luqale uhambo olukhulu kwiselfowuni ngothotho lwemidlalo yevidiyo entle kunye nokwenziwa okuhle. Hitman GO, Lara Croft Yiya y Deux Ex Yiya unyana Iigugu ezintathu zokugqiba kunye ne-finesse esisa kumanqanaba aneenkcukacha eziphakamileyo kunye neepuzzle ezithile eziza kukufumana utsibe kwindlela yabo ekhethekileyo yokwenza umdlalo wevidiyo. Olu luhlu lwe-GO liza kukhutshelwa ngamanye amagama kwaye ayothusi, kuba loo ndlela ikhethekileyo yokuhambahamba kwinqanaba lebhodi ukuya kwenza iihacks okanye ukubulala ezo ntshaba zilungeleyo eziya kuhlala zifuna ukwenza nzima yonke into, inento yayo kuwe. Masibone eminye imixholo kunye nabanye abalinganiswa.
Into eyenzekayo ngeHacker 2.0, isihloko esinokufana nale ngenxa yomxholo, kodwa inento eninzi yokwenza noluhlu lwe-GO Enix's GO. Ukuba sidibanisa kuyo ekhethekileyo chukumisa i-retro Ngabalinganiswa abayilwe kakuhle kunye neentshaba, sinomdlalo ojikeleze kakhulu onokuthi ushiye oopopayi kunye namaxesha ongezelelweyo anokukhokelela kwelinye inqaku lokugqibela. Elinye lawona manqaku asemagqabini yindlela elayisha ngayo amanqanaba, izisa ii-hubs okanye yeyiphi imephu ebonakalayo apho kufuneka uyeke khona kwiitheminali. Umdlalo wevidiyo obonakalayo, nangona umgama ukusuka eDeux Ex GO, ofana nokubethwa ngabaninzi abaza kuza kwezi nyanga kunye neminyaka elandelayo.
1 Asinguye wonke umntu onokuba sisigebenga
2 Jonga u-Deux Ex GO
Asinguye wonke umntu onokuba sisigebenga
Umxholo we-hacker ukukunika ukuze ukwazi ukubonelela ngenye indlela bonisa ujongano olubonakalayo Nokuba ligama lefayile ye-MP3 evakala njengengoma yesandi ngalo mdlalo ungoqobo uboniswa kwesi sizathu. Ingakhokelela nakwisiphithiphithi kwimizuzu yayo yokuqala ade umdlali aqonde ukuba imigca yekhowudi iyalayishwa ngokungathi ibingumyalelo wokuyalelwa kwiWindows PC. Oku kuyinika ukuba ngamanye amaxesha siyijonge, nokuba ngaba kamva ithembisa ngaphezulu kunokuba inikezela ngokubanzi.
IHacker 2.0 yindlalifa yokuqala yakhululwa kwi-iOS ngo-2012 kwaye ekugqibeleni sinayo kwiVenkile yokudlala kaGoogle nolu hlelo lwesibini. Umdlalo wevidiyo osizisela ezo zikrini ziluhlaza zee-80s, nangona ngendlela entsonkothileyo kwaye kwangaxeshanye namaxesha abadlala ngawo. Inkangeleko ebonakalayo kunye nale migca yekhowudi iyakwazi ukusirhangqa ukuze sikwazi ukuwafumana onke amanqanaba ekufuneka enikezwe ngumdlalo wevidiyo omnandi ekuqaleni.
Jonga u-Deux Ex GO
Uya kungena kwihlabathi ledijithali ngohlobo lwe desktop ebonakalayo ngayo kuya kufuneka uye kusiko lasekhohlo nasekunene ngohlobo lweepuzzle ezinemisebenzi eyahlukeneyo. Uya kuba nezakhono, ubuchule bokufumana izixhobo kwaye uziphucule. Kuya kufuneka uvule iindlela, uthumele umnxeba ngefowuni kwaye ucime ezo ntshaba.
Umdlalo ubonakaliswa ngu Amanqanaba ayi-80 ezineziphelo ezahlukeneyo zokukwazi ukuzigqiba. Njengoko iiterminal ezininzi zigqogqiwe, ungavula izakhono ezongezelelweyo kunye nophuculo olunikeza ithuba lokujongana naloo manqanaba ngendlela eyahlukileyo. Unomxholo wokuvula njengee-avatat ezahlukeneyo kunye ne-wallpapers ukwenza ngokwezifiso i-desktop yakho ebonakalayo.
Kulungile eza kubushushu be-series ye-GO onayo simahla kwiVenkile yeGoogle yokuDlala kunye nee-micropayments ezicacileyo.
Iyamangalisa indlela yayo yoqobo yokubonisa amanqanaba kunye nomdlalo kunye nemigca yekhowudi, kwaye jonga kwakhona kwi-pixel yobugcisa enika ubukho obuhle kakhulu. Oopopayi bokulwa balahlekile, njengoko iintshaba zinyamalala ngokulula njengokuqaqamba xa "isitokhwe" sabo siphelile.
Ujongano lwayo lwemigca yekhowudi kunye neefolda
Ukuchukumisa kwayo i-retro
Ukusilela oopopayi bokulwa
Ijongeka kakhulu njengoluhlu lwe-GO
Umthuthukisi: Iimbumbulu ezinomsindo
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » I-Hack inkqubo kwi-Hacker 2.0 kwi-Deux Ex GO
Sebenzisa amabala e-laser kunye nezipili ukusombulula iiphazili kwi-Sky